काठमाडौंले कसरी थेग्छ संक्रमणको आँधी ? – Nepal Japan
काठमाडौंले कसरी थेग्छ संक्रमणको आँधी ?
नेपाल जापान ३० पुष १२:३४
केही दिनयता बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राजधानी काठमाडौं उपत्यका भएको छ । बिहिबार थपिएका ३५ सय ५३ संक्रमितमध्ये उपत्यकामा मात्र आधाभन्दा बढी छ ।
बाक्लो जनघनत्व अनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कञ्जुस्याईका कारण देशभर थपिएका संक्रमितमध्ये काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको जोडदा आधाभन्दा बढी हुन्छ ।
हिजो बिहिबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २४ घण्टाको तथ्यांकमा पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १९ सय १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाइएको छ । संक्रमितमध्ये काठमाडौंमामात्र १४ सय ४९ रहेका छन् ।
यसै गरी ललितपुरमा ३१७ र भक्तपुरमा १५० गरेर १९ सय १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै काठमाडौं जिल्लामा मात्र संक्रमितको संङ्ख्या २ लाख ६२ हजार ५९ पुगेको छ जसमध्ये २ लाख ५३ हजार ९७५ जना निको भएका छन् भने २२ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
ललितपुर जिल्लामा अहिलेसम्म ५२ हजार ६५८ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा ५० हजार ३५६ जनाले कोरोना जितेका छन् भने ७११ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यसै गरी भक्तपुर जिल्लामा ३० हजार ९९४ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा २९ हजार ५९३ जनाले कोरोना जितेका छन् भने ४३८ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौंमा पाँच हजार ८ सय ४२, ललितपुरमा १५ सय ९१ र भक्तपुरमा ९६३ गरेर उपत्यकामा ८ हजार ३९६ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १४ हजार ३४० पुगेको छ । यो संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी हो । अहिले होम आइसोलेसनमा १३ हजार ५०३ जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा ८३७ आइसियूमा ११० र भेन्टिलेटरमा २५ जनाको उपचार भइराखेको छ ।
काठमाडौंमाा जुन गतिमा संक्रमण फैलिइरहेको छ अवस्था यस्तै रहेमा भविष्यमा कस्तो अवस्था आउने हो व्यापक चिन्ता थपिएको छ । समयमै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालनामा कडाई नगर्ने हो भने काठमाडौंमा कोरोना संक्रमणको आँधी नै आउने संकेत देखिएको छ ।
प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गरेर नियम पालना गर्नु भनेर मात्र जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सल्कदै गरेको आगो निभाउन सजिलो हुन्छ, तर आगो दन्किसकेपछि गाह्रो हुन्छ । अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको सुरुवात मात्र भएकाले रोकथाम गर्न सजिलो छ । समस्या बढेपछि नेपालको स्रोत, साधनले धान्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनसक्छ ।